Ahoana no mba hahazoam-bola ny fianjeran'i Bitcoin - Tray News - Blockchain News
Ahoana no mba hahazoam-bola ny fianjeran'i Bitcoin
Miaraka amin 'ny mpivarotra dia hahatakatra ny fomba hahazoana rehefa ny vidin'ny bitcoin dia very amin'ny alalan'ny fampiasana hoavy.
Araka ny CoinMarketCap, bitcoin voalohany nita an'i $ 10,000 Marka Novambra 28, 2017. Nanomboka tamin'izay, tamin'ny roa volana fohy, Nitombo avo roa heny ny vidiny ho $ 20,000 ary niverina indray $ 10,000.
99% ny olona izay nividy BitCoins afaka mahazo izany raha tsy rehefa ny vidin'ny vola ny crypto mitombo. Afaka mahazo ny lavon-fampiasana bitcoin hoavy. fa, indrisy, hoavy ny CBOE sy CME fifanakalozana tsy misy ny mpihazona ny BitCoins tsotra noho ny vidiny avo. Noho izany, ny loka anankiray teo amin'ny fifanakalozana CBOE dia mitovy amin'ny iray bitcoin, ary ny haben'ny fifanekena iray teo amin'ny fifanakalozana CME dia mitovy amin'ny dimy BitCoins. izany no, noho ny raharaham-barotra eo amin'ny fifanakalozana ireo mila manana petra-bola kely indrindra ny $ 10,000. Nefa misy lalan-kivoahana ho an'ny mpivarotra madinika.
Ny Chicago varotra, Exchange CME Mampiasa bitcoin fanondroana manokana natao mba hamantarana ny famonoana vidin'ny hoavy fifanarahana amin'ny andro lany. Ny mpamorona sy ny mpandrindra ireo indices dia tsy ny CME mihitsy, fa ny mpiara-miasa dia ny London orinasa Crypto Facilities Ltd.
Inona no atao hoe Crypto Facilities (CF)
Crypto Facilities dia crypto fifanakalozana izay miorina ao Londres sy efa voasoratra anarana amin'ny Financial Fitondran-tena Authority.
izany no, dia orinasa izay asa no nifehy ny maso fahefana ny iray amin'ireo kaja indrindra eto amin'izao tontolo izao les juridictions, ary dia tsy kisendrasendra fa ny biby goavam-be toy izany ny ara-bola toy ny varotra, Chicago Exchange CME efa nifidy orinasa ity ho toy ny mpiara-miasa mba hanomboka bitcoin hoavy.
Ny mpamorona ny crypto-fifanakalozana io no teo aloha mpitantana ambony eto amin'izao tontolo izao ny mpitarika banky: Goldman Sachs, Morgan Stanley, BNP Paribas sy Société générale.
Ny sehatra ara-barotra CF asa nanomboka telo taona lasa izay: in 2015, bitcoin hoavy no nandefa eto. dia, ao amin'ny fianjeran'i 2016, CF natomboky ny fifanakalozan hoavy for Ripple XRP. Tamin'ny volana Novambra 2016, amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny fifanakalozana tahiry Chicago CME, fanondroana for bitcoin no nandefa.
Koa satria ny fanombohana ny Crypto Facilities hoavy for Bitcoin sy Ripple ary hatramin'ny vao haingana ny anarana sarobidy ny fifanarahana eto koa prohibitive ho an'ny mpivarotra madinika: 1 BTC sy 10,000 XRP, mifanaraka.
Ary afa-tsy telo volana lasa izay, Oktobra 29, 2017, ny CF fifanakalozan nizotra ho any amin'ny face tena ilaina ny fifanarahana ary nanao ny hoavin'izy inversion: ankehitriny ny lanjan'ny fifanarahana face iray ihany dolara, i.e. Ankehitriny ianao dia afaka manokatra ny hoavy amin'ny toerana faran'izay kely ny petra-bola $ 1
Leverage sy ny turbo hoavy
Ara-barotra ao amin'ny CF dia sisim: bitcoin sy ripple hoavy manana 6-heny leverage.
Fa ny tena mafy dia nanatitra mpivarotra turbo hoavy ho bitcoin tamin'ny 50 heny soroka. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, hanokatra ny toerana ho an'ny 1 bitcoin, ianao fotsiny mila manana petra-bola ihany 0.02 BitCoins. Midika izany fa afaka avo roa heny ny habetsahan'ny ny Bet, raha ny vidin-bitcoin miova ny lafiny amin'ny alalan'ny ihany 2%. Na very ny vola ny dia asao ny vidiny, raha mandeha 2% diso lalana.
Mazava ho azy, izany dia tena safidy. Raha ny tena izy, dia afaka manao haben'ny ny loka, manomboka $ 1 ary niakatra ho any 6 fotoana ny haben'ny ny petra-bola ho an'ny olon-tsotra hoavy sy niakatra ho any 50 fotoana ny petra-bola vola ho an'ny hoavy turbo.
Mombamomba ny varotra
Hatramin'izao, ny CF fifanakalozan manana 4 karazana fifanarahana hoavy:
– Hoavy ny mpivady bitcoin-dolara tamin'ny 6-heny soroka;
– Turbo-hoavy iray lomisy ny BitCoins-dolara tamin'ny 50 heny soroka;
– Hoavy iray lomisy ny ripple-dolara tamin'ny 6-heny soroka;
– Hoavy iray lomisy ny ripple BitCoins tamin'ny 6-heny soroka.
Ny lany daty, isan-kerinandro hoavy dia namoaka iray sy tapa-bolana, ary ny hoavy ho an'ny telovolana iray ary faritra roa.
hoavy ponenana: lany mitranga amin'ny 16:00 GMT amin'ny Zoma, famonoana dia tanterahina amin'ny 18:00 ny fikajiana ny maha samy hafa ny amin'ny fanokafana ny vidin'ny toerana sy ny lanjan'ny ny ponenana fanondroana amin'ny fahataperan'ny andro. Trade dia natao manodidina ny famantaranandro ao amin'ny 24/7 fomba.
To manomboka varotra, dia mila manamarina ny tantara miaraka amin'ny fanampian'ny famantarana tahirin-kevitra, ary koa ny mandalo fitsapana kely ho an'ny fahalalana ny fitaovana ara-bola derivative.
Petra-bola any amin'ny fifanakalozana tahiry azo atao afa-tsy amin'ny alalan'ny vola roa crypto-: bitcoin sy ny ripple; Fiat vola tsy ekena.
Tsy toy ny maro hafa crypto-fifanakalozana, Crypto Facilities dia tsy mampiasa iray ihany ny kitapom-bola ho an'ny mpanjifa rehetra. Mpanjifa tsirairay dia manana olona misaraka adiresy ao amin'ny Bitcoin sy Ripple Network, ary ny mipetraka dia voatahiry ao amin'ny mangatsiaka mpanjifany.
Ity misy ohatra ny fomba tena tsirairay avy dia afaka manao vola amin'ny alalan'ny nandatsaka bitcoin:
Janoary 29, fohy toerana $ 500 nosokafana: ny herinandro-ela turbo hoavy namidy ho $ 11,143.
Rehefa avy 2 andro ny amin'izao fotoana izao dia notsongaina hoavy $ 9,414 ary ny tombom-barotra noho izany amin'izao fotoana izao no toerana 0.0056 BitCoins ($ 55.7).
Profit na Loss any Base Sandam-bola = (1 / Hoavin'izy Entry Price – 1 / Hivoaka hoavin'izy Price) * Position Size
Ny rano indray mitete ny bitcoin dia = 11,143 – 9914 = 1229 na 11%.
Ny tombony dia = 55.7 / 500 = 11.1%.
Noho izany, fohy ezaka tombony onitra noho ny famoizana ny rano indray mitete avy amin'ny vidin-bitcoin, raha mbola eto amin'ity raharaham-barotra iray leverage (leverage) ny 0.5 nampiasaina, izay, ny antsasaky ny petra-bola na ny habe 1/100 ny ambony indrindra azo atao 50-heny leverage.
Ho an'ireo izay maniry ny varotra amin'ny Cryptocurrencies tahan'ny miaraka amin'ny sorony niakatra ho any 1:500 ary 19 Cryptocurrency tsiroaroa, dia fahazoan-dalana LIBERTEX
Raha manana fikarohana ianao ...
StormGain tsy fivadihana fandaharana ...
Mahazo miaraka amin'ny crypto na dia ny ...
MAJOR CRYPTO NEWS | IOTA 2.0, Ethereum 2.0, Enjin, Swissborg, kafe, Matic Network